Posted on - 2020-10-09 11:38:24
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အချိန်ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်း (၈) ခု
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ တစ်နေ့တာမှာ အလုပ်ချိန်အများကြီးရှိကြတာမဟုတ်လို့ ရတဲ့အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အလုပ်ပိုတွင်ဖို့ဆိုတာ ကျားကုတ်ကျားခဲလုပ်ယူရတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပေမယ့်လို့ ကိုယ့်အချိန်ကို ကောင်းကောင်းစီမံတတ်ဖို့လိုတာ အမှန်ပါ။ ဒီပို့စ်မှာတော့ အဲဒီလိုအလုပ်ပိုပြီးမြောက်စေဖို့ ရိုးရှင်းထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
၁. 🔹အလုပ်တွေကို အချိန်ဘယ်လောက်ယူပြီးလုပ်နေသလဲဆိုတာ တွက်ချက်ပါ။🔹
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အလုပ်တွေကို အချိန်ဘယ်လောက်ယူပြီး လုပ်နေသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ အတွက်အချက်ကောင်းလှပြီလို့ ထင်နေပါသလား? ဥပမာ - နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်တွေအပြင် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ အီးမေးလ်တွေ အတွက် အသုံးပြုတဲ့အချိန်တွေ အပါအဝင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေသာ ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့အချိန်ကို အတိအကျခန့်မှန်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အလုပ်မှာ နားချိန်ကို သူ့အချိန်နဲ့သူထားတာဟာအလုပ်မှာအာရုံစိုက်နိုင်စွမ်း ပိုတိုးစေပါတယ်။ အချိန်ယူပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာ ခဏတဖြုတ် နားနားပေးရင် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ရည်ကို ကျမသွားစေအောင် ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုကို နားချိန်လုံးဝမယူဘဲ ဆက်တိုက်လုပ်တဲ့အခါ လုပ်ဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ထားရှိတဲ့ သင့်တင့်မျှတတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုက အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုစေပြီး အလုပ်ပြီးမြောက်စေပါတယ်။ အချိန်စိတ်ကြိုက်ယူလို့ရတဲ့အလုပ် ဒါမှမဟုတ် ပရောဂျက်တွေမှာ Deadline ကို ကိုယ့်ဘာသာသတ်မှတ်ပြီး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် အမီပြီးအောင်လုပ်နေရတဲ့အတွက် အာရုံဘယ်လောက်ပိုစိုက်နိုင်ပြီး အလုပ်ဘယ်လောက်တွင်သလဲဆိုတာ အံ့သြစရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၂ မိနစ် (သို့) ၂ မိနစ်အောက်နဲ့ ပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုရင် ချက်ချင်းလုပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအလုပ်ကို ချက်ချင်းလုပ်လိုက်တာက နောက်မှပြန်စလုပ်တာထက် အချိန်သက်သာစေပါတယ်လို့ နာမည်ကျော်အောင်မြင်ရေးစာရေးဆရာ တစ်ယောက် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းကို အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားက ကျင့်သုံးနေကြပါတယ်။
၅. 🔹ငြင်းပယ်လို့ ရနိုင်တဲ့ အစည်းအဝေးတွေကို ငြင်းလိုက်ပါ။🔹
အစည်းအဝေးတွေဟာ အချိန်အကုန်ဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ပျမ်းမျှရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာ အကျိုးမထူးတဲ့ အစည်းအဝေးတွေမှာ နာရီတော်တော်များများကို သုံးနေရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ နောက်ထပ် အစည်းအဝေးတစ်ခု မလုပ်ခင်မှာ အစည်းအဝေး အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ အလုပ်တွေကို အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်းနဲ့တင် လုပ်လို့ဖြစ်မလား ဆိုတာ စဉ်းစားပါ။
ဒါကတော့ ကိုယ့်အတွက် အချိန်ဘောနပ်စ်ရထားသလိုပါပဲ။ အလုပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာ မိုဘိုင်းဂိမ်းဆော့တာတို့ Facebook သုံးတာတို့လုပ်မယ့်အစား အလုပ်အီးမေးလ်ပို့တာတို့၊ တစ်နေ့တာလုပ်စရာကို စာရင်းလုပ်တာတို့ ဒါမှမဟုတ် အိုင်ဒီယာသစ်တွေစဉ်းစားတာတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်သုံးလေးမျိုးကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို အရေးကြီးတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုလို့ ယူဆတတ်ကြပေမယ့် အဲ့ဒီစွမ်းရည်က ထင်သလိုအလုပ်မပြီးမြောက်စေပါဘူး။ လုပ်ငန်းတာဝန်အများအပြားကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်တာဟာ အချိန်ကုန်စေသလို အလုပ်လည်းမတွင်လှပါဘူး။ အလုပ်တစ်ခုကို အရင်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပြီးမှ နောက်အလုပ်ကို ပြုလုပ်ပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဖို့ အချိန်ပေးတာဟာ အလုပ်တွင်စေဖို့ အမှန်တကယ် အကူအညီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ရုံးတက်ရတဲ့နေ့တွေထဲမှာ လမ်းလျှောက်ဖို့ သို့မဟုတ် Gym ကိုသွားဖို့အတွက် အချိန်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းကနေ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတာဟာ ခေါင်းကြည်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုပြန်ရဖို့ လိုအပ်နေတဲ့အရာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
▪️အထက်ပါ အချက်လက်တွေကတော့ အလုပ်ခွင်မှာ အချိန်ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ရေးသားထားတာပါ။
နောက်နေ့တွေမှာလည်း တခြားသော စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ဗဟုသုတရစရာတွေကို တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။
Aung Myin Page ကို Like and See First လုပ်ပြီး ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။